Bhala mabhalana: umazi wendlela ngumhambi wayo. | sinolwimi
Bhala mabhalana: umazi wendlela ngumhambi wayo.
Molweni bantu abanolwimi. Ndithi makhe ndithathe nje imizuzwana ndabelane nani ngendikubonayo nendikubonileyo.
Kuqala, isihloko sithi ‘bhala mabhalana: umazi wendlela ngumhambi wayo’. Akhange ndikwazi ukuzahlula, kuba endiza kuthetha kudibanisa zona zombini. Ukuba impazamo okanye ubugwenxa bukhona ndingavuya ukuba ningandikhwebela bucala nindilungise.
Ukusukela mhla ndaqala ukufunda iincwadi zesiXhosa, ndaye ndaphawula ukuba iidolophu ekubhalwa ngazo okanye ekubaliswa ngazo kumabali abhalwe kwiincwadi zesiXhosa azitshintshi. Ababhali abahlukeneyo, ingakumbi aba balapha eMpuma Koloni, babhala ngeZwelitsha, Phakamisa, New Brighton, eZibeleni okanye iLitha. Ndandizibuza ukuba kutheni kunjalo, ingaba ezinye ilokishi azibalulekanga okanye azinikisi mdla?. Kodwa ke ndandingaqondi ukuba zininzi izinto ezibangela kube njalo (ingcaciso iza kuba kwisiqendu esilandelayo).
Ukuhlabela mgama, xa kunamhlanje oko kutshintshile kancinci kuba uyakwazi ukufunda ngezinye ilokishi, ezifana neJoza (eRhini), Gugulethu nezinye. Kodwa ndiyacenga ndikwabongoza ababhali bethu ukuba babhale ngeendawo esihlala kuzo, sifuna ukuva amabali amatsha elixesha. Amabali athetha ngentlalo yethu kwelixesha siphila kulo. Kodwa ekwenzeni njalo, ukubhalwa kwesiXhosa makungatshintshi. Sinolwimi, yaye kufuneka silugcine silusebenzise.
Umazi wendlela ngumhambi wayo
Uncumo endiba nalo xa ndikhenketha iMpuma Koloni, ingakumbi amaphandle ayefudula esaziwa njengeCiskei neTranskei, aluthetheki. Kumaxesha amaninzi abantu endikhwele nabo imoto okanye ibhasi abaqondi ukuba kuqhubeka ntoni, ngoba ndithi ndithule, ndisuke ndincume. Eyona nto ingamandla endincumisayo kukubona amagama endiqhele ukuwabona, okanye endaqala ukuwabona kwiincwadi zamabali esiXhosa. Indawo ezifana neXesi, Zwelitsha, Phakamisa, iLitha kunye nemilambo nezakhiwo, xa ndihamba kuzo okanye ndizibona zitsho kuphuhliseke intsingiselo egqamileyo yencwadi leyo endakhe ndayifunda ngalo ndawo.
Eyona nto ndiyithethayo kukuba masilikhenketheni iphondo lwethu, sizazi indawo zethu ukwenzela sikwazi ukubhala ngezinto nangendawo esizaziyo.
One thought on “Bhala mabhalana: umazi wendlela ngumhambi wayo.”
Siyabulela bhuti. Ngenene kunjalo, yaye ngumnqweno wam ukulikhenketha eli lizwe loMzantsi. Iyinene into yokuba xa ulikhenkethile eli, uye ube nezinto ezinintsi esithi sikwazi ukubhala ngazo. Ngoko ke ndithi tshotsho ubekho bhuti, ulwimi lwethu luzakuma yaye luqine ngabantu abafana nawe lo.
Ndiyilindele ngamehlo abomvu ingcaciso yokuba yintoni ebangela ukuba ukuba kubhalwe ngeelokishi ezithile rhoqo, kodwa kungabhalwa ngezinye. Sawuva kwisiqendu esilandelayo ke. Okwangoku masikhe sibe sithi ‘Huntshu mfo kaNzayo! ‘